I-Marble Inn Resort - Isitezi esinamakamelo amabili we-Condo Ground - I-Airbnb
I-Marble Inn Resort - Isitezi esinamakamelo amabili we-Condo Ground
Corner Brook, Newfoundland and Labrador, i-Canada
Igumbi e-ifulethi eliyihhotela ibungazwe ngu-Joe
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Joe izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-condo enamakamelo amabili abanzi inegumbi lokulala elikhulu, igumbi lesibili, igumbi lokudlela, indawo yokuhlala kanye namagumbi okugeza amabili. Igumbi lokulala elikhulu linombhede ongusayizi wendlovukazi, i-flatscreen tv kanye negumbi lokugezela le-en-suite elinobhavu wejethi yomoya. Igumbi lokudlela linamathela ekhishini elihlome ngokuphelele elinokushisa kwaphansi okukhazimulayo ukuze likugcine uthokomele ezinyangeni ezipholile zasebusika. Indawo yokuhlala exhumene nayo inikezela ngezihlalo zabantu abane ezinezihlalo zengalo zesikhumba ezimbili kanye nesofa elilodwa lokudonsa.
Imibhede engusayizi we-Queen engu-2 emakamelweni okulala ahlukene
2 amagumbi okugeza
2 ama-TV esikrini esiyisicaba
Usofa wesikhumba (ulala umuntu oyedwa)
Ubhavu ojet umoya kanye neshawa ye-ceramic
Kwabiwe ngaphakathi amanzi anosawoti iyashisa i-pool
Jabulela ukungenisa izihambi eNewfoundland ebuhleni be-Humber Valley. IMarble Inn Resort iyindawo yokungcebeleka yezinkanyezi ezine nesigamu eNtshonalanga Newfoundland, ehlinzeka ngokunethezeka okusimeme phakathi kwezindawo ezivelele kanye nohambo lwangaphandle.
Itholakala osebeni lomfula i-Humber futhi nebanga lokuya e-Marble Mountain, uhambo luqala e-Marble Inn Resort. Chitha usuku uphonsa ulayini ezikhumulweni zethu zemikhumbi, uhamba eduze kwemizila, ugwedla emigwaqweni emincane noma ushibilika eNtabeni iMarble futhi uvumele abasebenzi bethu ukuthi banakekele okunye. Odinga ukukwenza ukuhlala futhi ujabulele ukubuka.
Izisebenzi zethu zokungcebeleka zizotholakala ukuze zisize kunoma yiziphi izinkinga noma imibuzo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Corner Brook namaphethelo